Calafka online dating - sei-irk.ru
Calafka online dating Chat sites for adults with no registration fee
To: Samsam , walaal dad badan baa waxyaabo fara badan ay isaga qasanyihiin, oo aan waligood kala saari karin wadani, kacaan,qabiil, diin, iwm.
War doqonyohow la isma dhiibee, rag buu ilaah kaa dhigay, do the right thing for your country.
Anaa mid kuu haya..Dabatadii iyo is kaashade nimankii daaroode Dalandooligii Nayroobi ayay dalaq yidhaahdeene Dad haday yihiin sida riyaha looma didiyeene Dal la'aani waw kuaw dhulay ku laabtaane Dabadaha ha mareysteen ilay diide nabadiiye.
Faysal ilaahay kalsooni ha ku siiyo kalsooni daro aa kaa qaylisiine daaroodka aa sheegtay aa kuu ah dal iyo dadba laaantoodna waxba ma tihid saa isku cadaysay.
Waa Somali oo la baxay Garyaqaan markii magacii aay ku dhegdhegeen kuwo laga roonyahay.
Salaan, Libaax, waxaba iimaad sheegin , laakiin sxb horta af soomaaliga sida loo qoro soo baro waa iga talee.
Laakiin si mala awaal ah qof walba ayaa aaminsan in jaceylku yahay wax ku abuuran qalbiga noolaha, laakiin ma is weydiisay inuu leeyahy waqti?
Kuman yaal diyaarado lagu raroo dibadda loo dhoofshay Kumanyaal dafiray hooyadood oo diiday dhaqankooda Kumanyaal darbiyada hurdoo daasad nacaloobay Kumanyaal dariiqii Alliyo diinta lacoloobay Kumanyaal dalkoodii gatoo dibad u iibgeeyey Kumanyaal darood iyo diinta dhaba mooday Kumanyaal sidaas kaa wadani daaca qurun booxa Dadkeennii intaas oo kun buu deeq ukala baxaye dalkeeniina dayac iyo dhibbaa diiftu wada gaadhay. Haddii wadani walaalaha aflagaadada kadeynwaayana afarey asaga ku wajahan ayaan usoo tirin doonaa.
Magaca aad wadato iyo sida aad u hadleyso isma waafiqikaraan.
Waxaanse ku faraxsanahay in aad walaashii doodan furtay aad aflagaadadii ka deysay.
Waa run in qaar naga mid ah ay ka aamin badan yihiin kuwa kale, Laakiin waayo-aragnimada badan ee aad u leedahay jacaylka iyo cilaaqaadkiisa ayaa laga yaabaa inuu ku saacidayo.
Jacaylka dhabta ah maahan dareen, laakiin waa xaalad gaar ah oo la dareemi karo. Dadku waa ay isbedelaan, qaar ayaana ku guuldareysta inay noqdaan lammaane iyagoo jacayl iyo saaxiibtinimo dhab ah wadaagay, laakiin kaliya waxaa kala fogeeya calafka.